नेपाल पनि स्ट्रोक सेन्टरको अवधारणामा जानुपर्छ– डा. विनोद वाग्ले :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
आइतबार, वैशाख ३०, २०७५, ०२:१६:१५
डा. विनोद वाग्ले अमेरिकाको कान्सस सिटीमा रहेर न्यूरोलोजी सेवा दिइरहेका छन् । ट्रुम्यान मेडिकल सेन्टर हस्पिटल हिलका तीन न्यूरो सर्जनमध्ये एक हुन् उनी । उपचार सेवामा १२ वर्षभन्दा बढी बिताइसकेका उनले भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसबाट एमबीबीएस गरेका हुन् । दमौलीमा जन्मेहुर्केका उनले कन्काइ उच्चमाविबाट एसएलसी र काठमाडौंस्थित निस्ट कलेजबाट आइएस्सी गरेका थिए । उनले अमेरिकाको भर्जिनिया कमनवेल्थ युनिभर्सिटी मेडिकल कलेजबाट न्यूरोलोजीमा विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन् । अमेरिकामा उनको उपचार अनुभवः
म विशेषज्ञताका लागि अमेरिका आउँदाको अवस्थामा नेपालमा न्यूरोलोजी मेडिसिनको अभ्यास सुरुवाती चरणमा थियो । किनभने न्यूरोमेडिसिन विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका निकै कम थिए । अहिले भने नेपालमा पनि न्यूरो मेडिसिनका विशेषज्ञ रहेको र अभ्यास हुन थालेको सुनेको छु ।
न्यूरोलोजी एउटा पूर्ण विषय भयो । चिकित्सा विज्ञानले न्यूरोका विभिन्न भाग, लक्षण र अवस्थालाई लिएर उपविषय समेत पहिचान गरिसकेको छ । त्यसैले अहिले न्यूरोमा पनि कुन समस्या केन्द्रीत उपचारमा आफूलाई दक्ष बनाउने भन्ने प्रचलन बढ्दो छ । एउटा विषय केन्द्रीत हुँदा सुक्ष्म तरिकाले रोग पहिचान र उपचार गर्न सकिन्छ । यहाँ हामीलाई समग्रमा न्यूरोलोजिष्ट भनिएपनि यही भित्रको एउटा विषयमा विशेष पकड जमाउन सकेमात्रै सफल चिकित्सक मानिन्छ । नेपालमा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विस्तारै भित्रिएला । विशेषज्ञ र प्रविधि अभावका कारण ढिलाइ भने हुनसक्छ ।
हृदयाघात भएको मान्छेको जति चाँडो उपचार ग¥यो बचाउन सकिने सम्भावना उति बढी हुने कुरा पहिलेदेखि नै थाहा छ । तर, पक्षघातका बिरामीका लागि पनि समयको ठूलो महत्व हुन्छ । यो विषयमा धेरैको ध्यान पुगेको देखिदैन । पक्षघात भएपछि बिरामीको उपचार जति चाँडो गर्न सकियो त्यति जटिल समस्या आउनबाट रोक्न सकिन्छ । किनभने जति चाँडो उपचार थाल्यो, त्यति दिमागका न्यूरोनको क्षति कम हुने हुन्छ । ६० मिनेटभित्र जाँच गरेर उपचार सुरु गरिसक्नु राम्रो मानिएको छ ।
न्यूरोलोजीको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने ‘स्ट्रोक सेन्टर’को अवधारणामा पनि जानुपर्छ । उक्त सेन्टरमा यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जाँच हुनुका साथै तुरुन्तै उपचार थाल्न सकिने वातावरण जरुरी हुन्छ ।
न्यूरोसँग सम्बन्धित धेरै त दीर्घरोग हुन्छन् । लामो समय उपचारमा रहनुपर्ने हुनसक्छ । निरन्तर चिकित्सकको निगरानी जरुरी हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा फिजिकल थेरापी र रिह्याब अनिवार्य शर्त हो । अस्पतालमा यी कुरा उपलब्ध भयो भने न्यूरोका बिरामीलाई लाभ पुग्न सक्छ ।
समग्र उपचार प्रणालीको कुरा गर्दा बिरामीकेन्द्रीत उपचार प्रणाली स्वीकारेको छ अमेरिकाले । त्यसैले यहाँको अनिवार्य शर्त नै बिरामीलाई प्रशस्त समय दिनुपर्ने हुन्छ । न्यूरोलोजीमा त झन् लामो समय दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ बिरामी भए एक घन्टासम्मको समय दिनुपर्ने हुन्छ । फलोअपमा रहेका बिरामीका लागि ३० देखि ४० मिनेट समय दिनुपर्छ ।
बिरामीलाई विकल्प सुझाउन जरुरी हुन्छ । बिरामी आफैं पनि सचेत भएकाले कतिपय अवस्थामा गुगलमा चेक गरेर आउँछन् भने कतिपय अवस्थामा सोधेरसमेत आएका हुन्छन् । त्यसैले पनि चिकित्सक आफ्नो कर्ममा सदा सचेत रहन जरुरी हुन्छ ।
बिरामीको जाँचपछिको नतिजा इमेल गर्ने प्रचलन छ । सामान्य भयो भने अस्पतालको कल सेन्टरबाट नर्सले फोन गर्छन् भने असामान्य हुँदा डाक्टरले नै फोन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बिरामीले रिपोर्ट पाउने बित्तिकै आफैं फोन गर्छन् ।
बिरामी र डाक्टरको सम्बन्ध उपभोक्ता र सेवा प्रदायकको जस्तो हुन्छ । समाजमा पनि डाक्टर भनेर त्यस्तो कुनै फरक दृष्टिकोण हुँदैन । खासगरी अस्पताल प्रशासनले बिरामीलाई उपभोक्ताका रुपमा लिने भएकाले बिरामीले पनि सेवा प्रदायकका रुपमा लिएका हुन् ।
बीमा उपचारमा प्रणाली बलियो र विश्वस्त बनाउनु सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । यसले अनावश्यक र निश्चित प्रणालीभन्दा बाहिर गएर उपचार गर्न दिँदैन । सदा क्रस चेकका लागि बीमा कम्पनी तयार भएर बसेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ केही फरक जाँचका लागि सुझाउँदा पनि उनीहरुको ‘किन गर्नुपर्‍यो यो जाँच ?’ भन्ने प्रश्नको उपयुक्त उत्तरका लागि तयार रहनुपर्छ । यसले गर्दा अस्पतालले अनावश्यक जाँच गराउन पाउँदैन । चाहिनेभन्दा बढी दिन अस्पतालमा राख्न पनि पाउँदैन ।
पचारका लागि भर्ना हुने दिन नै विशेष परिस्थितिबाहेक डिस्चार्ज हुने दिनसमेत तय भइसकेको हुन्छ । कुन समस्याको कतिदिन अस्पताल राखेर उपचार गर्दा ठीक हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु सचेत हुन्छन् ।
हाइ अल्टिच्युड रिसर्चले जुराएको स्कटल्यान्ड यात्रा डा सुवेदी आफ्नो कार्यक्षेत्र उतै भए पनि नेपालको चिकित्सा क्षेत्रसँग पनि जोडिइरहन चाहन्छन्। पारिवारिक बाध्यता तथा कामका कारण उनी तत्कालै नेपाल नै फर्किहाल्ने सोचमा भने छैनन्। शनिबार, जेठ २१, २०७९
२५ वर्षदेखि इंग्ल्याण्डमा कार्यरत डा साह भन्छन्– स्वास्थ्य सेवा चिकित्सक होइन बिरामी केन्द्रित हुनुपर्छ अनुहारको अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई बेवास्ता नगर्नको उनको आग्रह छ। कतिपय अभिभावकले जन्मजात हुने अनुहार अपाङ्गताका कारण बालबालिकालाई सडकमै छाडि दिने गरेको उनले बताए। शनिबार, चैत ५, २०७८
विश्वभरका नेपालीको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित प्रवासी डाक्टर शनिबार, माघ ११, २०७६